Tababare Marurizio Sarri Oo Soo Bandhigay Sababta An Kursiga Kaydka Loo Fadhiisin Karin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Iyo Kylian Mbappe - Gool24.Net
Tababare Marurizio Sarri Oo Soo Bandhigay Sababta An Kursiga Kaydka Loo Fadhiisin Karin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Iyo Kylian Mbappe
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea, Maurizio Sarri ayaa sheegay inaan sababo la xidhiidha nasin loo fadhiisin karin xiddigaha Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar iyo Kulian Mbappe.
Tababare Maurizio Sarri waxa uu tilmaamay in jadwalka ciyaaraha caalamiga ah ee cidhiidhiga ah dartii aan loo fadhiisin karin xiddigahan, laakiin kooxdiisa Chelsea ay u baahan tahay inay dibu-abaabul isku samayso.
Messi iyo Ronaldo ayaan ka qayb-gelin ciyaarihii qaramada Argentina iyo Portugal, laakiin xiddigaha Paris Saint-Germain ee Neymar iyo Mbappe ayaa dhaawacyo kasoo gaadheen ciyaarihii dalalkooda Brazil iyo France, waxaana uu tababare Tuchel xaqiijiyey in kulanka Sabtida ee horyaalka Ligue 1 ay seegi doonaan, sidoo kalena waxa uu shaki weyn ku jiraa inay fursad u heli doonaan ciyaarta muhiimka ah ee Champions League ee kooxdoodu ay Arbacada ku martigelin doonto Liverpool.
Inkasta oo PSG ay dhibaatadan la kulantay, haddana Chelsea ayaa nasiib wanaagsan lahayd oo ay ciyaartoygoodu usoo laabteen iyagoon dhibaato la kulmin, hase yeeshee tababare Sarri ayaa ku adkaystay inay lagama maarmaan tahay in isbeddel la sameeyo.
“Waxa jira ciyaartooyo ay qaarkood aad muhiim u yihiin oo ay tahay inay 70 illaaa 75 kulan ciyaaraan xili ciyaareedkii. Dhibaato ayay ku tahay kooxaha sida anaga oo kale, sababtoo ah 16 ciyaartoy ayaa dalalkooda u ciyaaray.” Sidaas waxa yidhi tababare Sarri.
“Waxay ila tahay inaynu u baahanay in dib loo abaabulo kubadda cagta, sababtoo ah, waqtigan, aad ayay ayey ugu adag tahay ciyaartoyga inuu xaalad wanaagsan ku jiro 75 ciyaarood, wayyna ku adag tahay kooxaha inay nasiyaan sida Messi oo Barcelona ah, ama Cristiano Ronaldo oo Juventus ah ama Mbappe iyo Neymar oo PSG ah.
“Dhibaato weyn ayay ku tahay kubadda cagta casriga ah.”
Fikirka Sarri waxa ku waafaqay tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool, Jurgen Klopp oo dhawaaq kan oo kale ah warbaahinta mariyey mar uu ka hadlayey shir jaraa’id ka hor ciyaarta Sabtida ee Watford.
“Muhiim ayay tahay in wiilashu (ciyaartoygu) caafimaad ahaadaan inta suurtogalka ah, taamna noqdaan, waana caqabad aanu waajahayno.” Sidaas ayuu yidhi Klopp.
“Fasixii ciyaaraha caalamigu wuu ii wanaagsanaa aniga binu-aadam ahaan laakiin tababare ahaan waalli ayay ahayd. Badhtamaha xili ciyaareedka ayay sagaal ciyaartoy naga baxayaan.
“Robbo (Andy Robertson) wuu soo laabtay, tababarkii maanta ayaanu markii u horreysay qaatay kaddib laba kulan oo adkaa oo Scotland uu u ciyaaray. Labada kulan ee toddobaadka oo uu ka ciyaaray meelo kala duwan iyo tababarro kala duwan – waa inaanu samayno bilow cusub.” Ayuu yidhi Klopp oo sidoo kale tilmaamay in shanta usbuuc ee soo socday ay toban kulan oo adag kusoo waajahan yihiin.